आजको आकष्मिक मन्त्रिपरिषद बैठक केही मन्त्रीका लागि अन्तिम बैठक हुन सक्ने ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com
आजको आकष्मिक मन्त्रिपरिषद बैठक केही मन्त्रीका लागि अन्तिम बैठक हुन सक्ने !
प्रायः सोमबार र बिहिबार बस्दै आएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक सोमबार बसेपछि मङ्गलबारका लागि पनि डाकिएको छ । २४ असारको विहान सात बजे बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ब्रेकफाष्टसहितको बैठक बोलाएका छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्ततिर बस्न लागेको बैठकले के महत्वपूर्ण निर्णय लेला भन्ने चासो छ । स्रोतका अनुसार केही मन्त्रीहरुका लागि यो बैठक नै यो मन्त्रिपरिषद्मा अन्तिम सहभागिता हुनसक्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि मन्त्रीहरुको हेरफेर र कार्यविभाजनको दबाब परेपछि निर्णय लिएका थिएनन् । आर्थिक वर्षको अन्तमा यस्तो निर्णय लिंदा गलत सन्देश जाने भन्दै ओलीले पर्खिएका थिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले केही मन्त्रीहरुको हेरफेरमा चासो देखाइरहेका थिए । आफ्नै पहलमा नियुक्ति पाएका केही मन्त्रीहरुप्रति प्रचण्ड असन्तुष्ट छन् ।
केही मन्त्रीहरु विवादमा पनि परेका छन् । कार्यसम्पादनमा कमजोर भए नभएको मूल्यांकन समेत गरिएबाट मन्त्रीहरुको पद धरापमा परिसकेको थियो ।
मन्त्रीमण्डलमा हेरफेरको सम्भावनाबारे सूचना पाएपछि मन्त्रीहरु पछिल्लो हप्ता निकै कडा रुपमा प्रस्तुत भए । केहीले संसदीय समितिमा आक्रोश पोखे । केहीले सचिवहरुले गुमराहमा राखेको समेत भने । कर्मचारीतन्त्रप्रति धेरै मन्त्रीहरु असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ । उनीहरुले आफूहरुलाई साथ दिनेभन्दा अलमलाउने गरेको गुनासो पोख्ने गरेका छन् ।
मन्त्रीहरुको गुनासाका कारण केही सचिवहरुका सरुवा पनि भयो । यता, प्रधानमन्त्री ओली पनि कर्मचारीतन्त्रको व्यवहारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनले कर्मचारीतन्त्रमा केही परिवर्तनको तयारी गर्दै आएका छन् ।
सरकारले अब मोबाइलमा निगरानी गर्ने
यो सिस्टममा देशभर प्रयोग भएका सेटहरुलाई तीन प्रकारमा बाँडिनेछ । वैधानिक रुपमा प्रश्न नउठेका मोबाइलहरुलाई ‘ह्वाइट लिस्ट’मा राखिनेछ । हराएका र वैधानिकतामा प्रश्न उठेका मोबाइललाई ब्ल्याक लिष्ट (कालोसूची)मा राखिनेछ । नक्कली आईएमईआई राखेर दर्ता गरिएका सेटलाई ग्रे(लिस्टमा राखिनेछ ।